Ligue des Champions de l’Uefa Ho mafimafy ireo lalao miverina
PSG France Nandray fepetra amin'ireo mpilalao tanora
Nandray fepetra matotra amin'ireo mpilalao tanora ao aminy noho ny fiantraikan'ilay coronavirus any aminy ny ekipa mpanao baolina malaza PSG any Frantsa.
Vita tamin'iny faran'ny herinandron’ny volana febroary lasa teo iny ireo lalao mandroso amin’ny dingan'ny ampahavalon-dalan’ny fiadiana izay ho tompodakan’i Eoropa eo amin'ny taranja baolina kitra na ny “Ligue des Champions de l’Uefa”.
Azo inoana fa mbola ho baolina be no hiandry ny Olympique Lyonnais amin'ny lalao miverina hifanandrinany amin'ny Juventus, toy izany koa ny fihaonana eo amin'i Dortumund izay hivahiny any Paris . i Liverpool tompondaka farany koa dia tsy hanaiky mora foana manoloana ny Atletico ny Madrid fa dia tsy maintsy hanao izay faraheriny handinganany an’ity dingana ity hirosoany amin’ny dingana manaraka.
Vokatry ny lalao mandroso ampahavalon-dalan’ny ligue des Champions de l’Uefa :
-Lyon 1 – 1 Juventus
-Real de Madrid 1 - 2 Manchester City
-Naples 1 – 1 Barcelone
-Atlanta 1 – 1 Valence
- Tottenham 0 - 1 RP Leipzig
-Atletico Madrid 1 – 0 Liverpool
-Dortumund 1 - 0 PSG